अमेरिकी सिनेटर टम कटनद्वारा बेइजिङलाई चेतावनी
काठमाडौं, एजेन्सी, साउन २३-अमेरिकी सिनेटर टम कटनले बेजिङलाई चेतावनी दिँदै मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत हङ्कङमा आन्दोलनकारीमाथि ‘कानुन उल्लङ्घन’ गरिएको बताएका छन्। उनले अमेरिकी सरकारलाई हङ्कङका विषयमा चीनविरुद्ध कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
कटनको भनाइ अगाडि बेजिङले हङ्कङको दङ्गा दबाउन शक्ति प्रयोग गर्ने कहिल्यै भनेको थिएन। त्यसको सट्टा हङ्कङको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) सरकार र प्रहरीले सहरको कानुनको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि आग्रह मात्र गरेको थियो।
जनसेना (पीएलए)ले हङ्कङमा हस्तक्षेप गर्छ भनेर सञ्चारमाध्यमले सोधेका प्रश्नको जवाफमा बेइजिङका सबैजसो अधिकारीले आधारभूत कानुनको रक्षाका लागि कतव्र्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका थिए। किन अमेरिकी कानुन निर्माता तथा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरु हङ्कङमा जनसेनको कदमबारे यति धेरै ख्याल गरिरहेका छन् ? यसको मतलब उनीहरु हङ्कङका उग्र आन्दोलनकारी धेरै टाढा पुगिसके भन्ने विश्वास गर्छन्।
आन्दोलन दङ्गामा परिणत भइरहेका छन्। उनीहरु कहिल्यै पनि शान्ति स्थापना होस् भन्ने चाहँदैनन्, हङ्कङको कानुनी राज्य तथा शान्ति भङ्ग चाहन्छन्। उनीहरुले गम्भीर रूपमा एचकेएसएआरको शासनमा असर पारेका छन्। यस्तो दङ्गालाई कुनै पनि समाजले सहिरहन सक्दैन।
यदि यस्तै दङ्गा अमेरिकामा भयो र प्रहरीमाथि हिंसात्मक आक्रमण भयो भने त्यो अवस्थामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाले पहिले नै कारबाही गरिसकेको हुने थियो भन्ने अमेरिकी कानुन निर्माताले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसो भए पनि उनीहरुले हङ्कङका दङ्गाकारीलाई कहिल्यै चेतावनी अथवा आलोचना गरेनन्। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीद्वारा उग्र आन्दोलनकारीका पक्षमा सोमबार विश्वमा उत्तेजक सन्देश प्रवाह गरियो। यो स्वाभाविक हो, उनीहरु हङ्कङमा दङ्गा बढाउन चाहन्छन्। दङ्गाले हङ्कङका जनताका अधिकारमा खराबी ल्याउँछ भन्नेमा उहीहरुले ध्यान दिएका छैनन्।
‘एक देश, दुई प्रणाली’ नीतिका कारण हङ्कङको समाजमा प्रभाव पार्न बासिङ्टनले हरतरहको प्रयास गरिरहेको छ। पश्चिमाले भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्, हङ्कङको आन्दोलन त एउटा सामान्य कारण मात्र हो। तर पनि पश्चिमा समाजका लागि दङ्गापूर्ण क्रियाकलाप गैरकानुनी एवं गलत राजनीतिक हुँदैन। बेइजिङविरुद्ध उनीहरुको चेतावनी उग्र प्रदर्शनकारी थप भड्काउने अभीष्ट हो।
हङ्कङको प्रदर्शन निर्दयपूर्वक तर्कहीन भएको छ। यो तर्कहिनरूपमा अगाडि गइरहेको छ। यसले निरन्तर रूपमा भ्रमित पारिहेको छ। अमेरिकी कानुन निर्माता, सञ्चारमाध्यम र सरकारी अधिकारीहरु उग्र आन्दोलनकारीलाई बहकाउन हङ्कङ मामिलामा बोलिरहेका छन्। के यो हङ्कङको अवस्थामा हस्तक्षेप गर्न बाह्य शक्तिको ‘अदृश्य चाल’ होइन ?
पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले प्रजातन्त्रको अलापिरहेको छ। अमेरिकामा यही अगस्ट महिनाको पहिलो साता गोलबारीका गम्भीर दुई घटनामा परी दर्जनौँ जनता मारिएका छन्। अरू दर्जनौँ घाइते भएका छन्। यो भयङ्कर मानव अधिकार विनास हो। पछिल्लो दुई महिना हङ्कङमा भएको प्रदर्शनमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। कुनै पनि सर्तमा हङ्कङको मानव अधिकारको अवस्था अमेरिकाको भन्दा राम्रो छ। अमेरिकाले उपदेश दिएर सत्यलाई बङ्ग्याइरहेको छ।
अमेरिका तथा अन्य पश्चिम देशहरुबाट हङ्कङका जनता मूर्ख बन्नु हुन्न। हङ्कङ ७० लाख जनताको घर हो । लामो समदेखिको अन्दोलनका कारण उनीहरुको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। जनताले हङ्कङ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। प्रहरीले कानुनी अवस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। न्यान्सी पेलोसीबाट जनता गलत बाटोमा लाग्नु हुन्न।
यही हङ्कङको अवस्था थप नाजुक भयो र एचकेएसएआर सरकारले अवस्था नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यस अवस्थामा केन्द्रीय सरकार त्यो नाजुक अवस्थालाई चुपचाप हेरेर बस्दैन। आधारभूत कानुन भरपूर उपयोग गर्न र हुनसक्ने कुनै पनि अस्तव्यस्त अवस्थालाई तुरुन्त ठीक गर्न केन्द्रीय सरकारले आवश्यक शक्ति तथा उपाय प्रयोग गर्छ।
हामी केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपरोस् भन्नेमा छौँ। हामी एचकेएसएआर सरकारको आदेश पालना गरेर उच्च स्तरको स्वायत्तताका लागि हङ्कङबासीलाई अडिग रहन शुभकामना दिन चाहन्छौँ। मौन रहेका बहुसङ्ख्यक उठे भने दङ्गासँग जुध्न सहयोग पुग्छ र अन्ततः हङ्कङमा देखिएको असहज अवस्थामा कमी आउँछ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष सम्बोधनः जम्मु काश्मिरबारे १४ वटा महत्वपूर्ण बुँदासहित
पाकिस्तानलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न भारतको आग्रह
म्यानमारमा रिहा भए ६ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी
रोहिङ्ग्या शिविरमा भीषण आगलागी, १५ शरणार्थीको मृत्यु